बाम गठबन्धनः कम्युनिष्ट संगठनको अन्तिम अवसान
HOME » बाम गठबन्धनः कम्युनिष्ट संगठनको अन्तिम अवसान
कुनै समय पानी बारबारको स्थितिमा रहेका एमाले र माओवादीले चुनावी तालमेल गरी वाम एकता गर्ने घोषणा गरेपछि मुलुकको राजनीतिक एकाएक तरंगित हुन पुगेको छ। मुलुक दसैं मनाउन व्यस्त रहेका बेला एमाले, माओवादी र नयाँ शक्तिबीच चुनावी तालमेल गर्दै वाम एकता गर्न सहमत भएपछि मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको हो।
वाम गठबन्धन निर्माण भएपछि सोको विषयमा क्रिया प्रतिक्रिया बाहिर आएका छन्। धेरैले यो गठबन्धनलाई अस्वाभिक र प्रत्याशित भएको टिप्पणी गरेको सुनियो। तर वास्तवमा यो अस्वाभाविक र अप्रत्याशित होइन। यो स्वाभाविक हो र यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ।
किन बन्यो बाम गठबन्धन?
तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन अन्र्तगत दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा एमालेले जुन अवस्था व्यहोर्यो र माओवादीले जुन हैसियत प्राप्त गर्यो, त्यसले गठबन्धनको आधार तयार पारेको थियो। गठबन्धन निर्माणमा मधेसका मतदाता एक प्रकारले सूचकका रुपमा रहेको मान्न सकिन्छ। दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचनको परिणाम लगत्तै गठबन्धनको कसरत सुरु गरिनु र त्यसले सार्थकता पाउनुले परिणामका कारण एमाले निकै अत्तालिएको रहेछ भन्ने पुष्टि भयो।
निकै महत्वकांक्षी र राष्ट्रवादी नारा दिएर एमालेले क्षणिक रुपमा जनतालाई आफ्नो पक्षमा पारेर बहुमतको सरकार गठन गर्ने कोशिस गरेको थियो। तर, २ नम्बर प्रदेशमा एमालेको त्यो रणनीतिले फेल खायो । परिणाम आफूले सोचेकोभन्दा ठिक विपरित आएपछि एमाले अत्तालिनु स्वभाविक नै थियो र त्यही भयो ।
स्थानीय निर्वाचनको सुरुका परिणामले उत्साही देखिएको एमालेले तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि त्यही अपेक्षा गरेको थियो । र, सुरुका २ निर्वाचनको परिणामअनुसार बाँकी नतिजा आएको भए एमालेले आगामी निर्वाचनमा पनि बहुमत पाउने लक्षण देखिएको थियो । तर, २ नम्बर प्रदेशको परिणामले एमालेको अपेक्षा पूरै उल्टाइदियो ।
परिणाम उल्टिएसँगै आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर एकछत्र राज गर्ने एमालेको चाहना पूरा हुन नसक्ने प्रस्ट भयो । तराईका जनताको अभिमतले आफ्नो चाहना पूरा नहुने देखेपछि एमाले अत्तालिएर माओवादीसँग ६०/४० सिट बाँडफाँड गर्ने प्रस्तावमा सहमत भएको हो । एमालेले सत्ता र शक्ति आर्जनको लागि माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने तयारी गरे पनि माओवादीसँग मात्रैको गठबन्धनको अर्थ अर्कै लाग्ने हुनाले नयाँ शक्तिलाई पनि त्यसमा सहभागी गराएर समग्र कम्युनिष्टको एउटै पार्टी बनाउने प्रचारबाजी गरियो। यो स्वाभाविक हो र कुनै अचम्मको कुरा होइन।
यो कम्युनिष्ट संगठनको अन्तिम अवसान हो। अब कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता होइन विविधता हुन्छ र त्यसपछि असली रुपमा लोकतान्त्रिकरण सुरु हुन्छ। नत यो गठबन्धनले साम्यवाद ल्याउँछ, नत यो गठबन्धनले बहुमत ल्याउँछ। यसले एकलौटी सरकार गठन गर्न पनि सक्दैन। यो गठबन्धन पतनको सुरुवात हो।
कांग्रेस किन आत्तियो?
वाम गठबन्धन निर्माण भएपछि आफूलाई लोकतान्त्रिक शक्ति दाबी गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस अनावश्यक रुपमा आत्तिएको देखिएको छ। प्रतिपक्षको गठबन्धनले नेपाली कांग्रेस अत्तालिनुपर्ने थिएन। यो गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसलाई राम्रै हुने थियो। एउटा चुनावमा केही कम बेसी हुँदैमा चुनाव हारियो भन्नु हुँदैन। सिद्धान्त हार्नु हुँदैन।
आफ्नो विचार सिद्धान्त हार्नु हुँदैन। अन्तिम विकल्प भनेको नेपाली कांग्रेससँगै छ। सांसारिक परिस्थितिले आज, भोलि, पर्सी कांग्रेसले बोकेको सिद्धान्तले नै सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। यो मुलुकको राजनीतिक केन्द्रको मियो नेपाली कांग्रेस नै हो। त्यसकारण अहिलेको वाम गठबन्धनदेखि कांग्रेस अत्तालिनु नेतृत्वको अपरिपक्वता हो।
अहिले एमालेको जस्तो सशक्त र बलियो संगठन छ, यो गठबन्धनपछि त्यसमा विग्रह आयो भने अचम्म मान्नु पर्दैन। र २५ वर्ष घर बनाएर दश वर्ष बन्दुकसँग लडेर संघर्ष गरेका बाबुराम भट्टराई बाहिरिन्छन् भने अहिले गठबन्धनमा आएर उनीहरु बसिहरन्छन भन्ने कुनै भर हुँदैन।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको स्वभाव दोस्रो वरियतामा बस्ने छैन। उनी जहिले पनि नेतृत्वमा रहनु पर्छ र आफ्नो संगठनको केन्द्रमा बस्नुपर्ने उनको स्वभाव छ।
उनी पार्टी एकीकरण गरेर केपी ओलीको अण्डरमा बस्छन् भनेर सोच्नु गलत हुन्छ। यो केवल चुनावी गठबन्धनका लागि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम हो। यसबाट कांग्रेस आत्तिनुपर्ने कुरा आउँदैन। जहाँसम्म लोकतान्त्रिक धारले पनि नयाँ गठबन्धन गर्ने चर्चा छ, त्यो पनि संभव छैन। किनभने क्षेत्रीय दलको सिद्धान्त र स्वार्थ फरक छ।
क्षेत्रीय दलसँग प्रत्येक प्रदेशमा चुनावी तालमेल गरिनु अस्वाभाविक होइन, संभव छ र गर्दा पनि हुन्छ। तर क्षेत्रीय दलसँग राष्ट्रिय रुपले गठबन्धन गर्नु अस्वाभाविक छ। यो कांग्रेसका लागि सुहाउने विषय होइन। अन्ततः यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन पनि असफल हुन्छ।